Mamorona lahatsoratra ho toy ny saron-tava clipping amin'ny Illustrator | Famoronana an-tserasera
Mamorona lahatsoratra ho toy ny saron-tava clipping amin'ny Illustrator
Alicia gonzalez | | Graphic Design
Te hahay mamorona sy manitsy saron-tava ve ianao? Manaraka izany, hazavainay amin'ny dingana vitsivitsy ny fomba fanaovana azy.
Inona no atao hoe saron-tava? Una saron-tava dia lalana vector izay ahafahanao manafina singa iray (làlana na sary), ka io endrika io dia mahazo ny endrik'ilay sarontava, manafina ny zava-drehetra ivelan'ny lalana. Fitaovana tena azo ampiharina ary manome valiny mahaliana tokoa.
Misy fomba maro hamoronana saron-tava. Ny fahafantarana ny tsiambaratelo rehetra an'ny Adobe Illustrator dia asa sarotra sy sarotra. Amin'ity lesona tsotra ity dia hanazava fomba iray hamoronana saron-tava misy soratra ho toy ny fotony isika.
1 Safidio ny singa tianao saron-tava
2 Soraty ny lahatsoratra
3 Mamorona sarontava
4 Ankafizo ny saron-tava ataonao
Safidio ny singa tianao saron-tava
Voalohany indrindra, tsy maintsy misafidy ny singa izay hosaronanao masonao ianao. Ohatra, sary. Ity sary ity dia tsy maintsy ho tsara kalitao ary tsy maintsy mitovy habe na lehibe noho ny sarontava. Afaka mahita sary misy kalitao ianao any amin'ny banky sary toa Unsplash, pixabay o Picography.
Sary nalaina tao amin'ny Unsplash
Soraty ny lahatsoratra
Soraty avy eo ny lahatsoratrao.
Tadidio fa ny lahatsoratra dia tokony ho ambonin'ny sary. Raha handefa ny sary any aorianao, dia tsindrio eo ankavanana ny sary ary omeo ny safidy handamina -> alefaso any aoriana.
Manoro hevitra anao izahay hampiasa typeface misy tsipika matevina. Raha mampiasa typeface misy kapoka tsara ianao dia tsy hankasitrahana ilay sary. Ka alohan'ny hanombohana dia diniho tsara ny fomba itiavanao ny volavola ary tadiavo ireo typeface mety indrindra aminy.
Raha vantany vao manana ny sary sy ny lahatsoratra eo amin'ny solaitrabe ianao, ny sisa tavela dia ny mamorona sarontava.
Mba hanaovana izany dia safidio ny Object -> Clipping Mask -> Manaova
Tadidio fa tsy maintsy misy ireo zavatra roa ireo voafantina. Raha hisafidy, kitiho ny fitaovana Picker.
Ankafizo ny saron-tava ataonao
Mahay! Efa anananao ilay sarontava clipping miaraka amina lahatsoratra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Mamorona lahatsoratra ho toy ny saron-tava clipping amin'ny Illustrator
Tsy maintsy manana Windows 10 nohavaozina ianao vao afaka mankafy ny fanavaozana Photoshop sy Lightroom vaovao
Nifangaro tamin'ny taona 80 i Muse tamin'ny 'rakotra' vaovao an'ny rakikirany vaovao